Farihy fito miloko izay toa avy amin'ny planeta hafa | Vaovao momba ny dia
Maria | | Inona no ho hita, Tsangatsangana
Baikal, Victoria, Titicaca, Michigan na Tanganyika no farihy izay mety ho malaza indrindra eto an-tany noho ny antony iray na hafa. Na izany aza, eto amin'ny planetantsika dia misy rano hafa mifangaro toy ireto izay mamirapiratra amin'ny hazavany manokana noho ireo toetrany hafahafa saingy tsy fantatra. Ireo zavamiaina samihafa monina ao anaty rano, ny firafitr'izy ireo ary koa ny fiasan'ny maripana ambony dia ireo no mahatonga izany misy farihy miloko tsara sy manelingelina erak'izao tontolo izao.
1 Lake Hillier (Aostralia)
2 Lake of the Clicos (Espana)
3 Farihy Kelimutu (Indonezia)
4 Laguna Verde (Bolivia)
5 Lake Natron (Tanzania)
6 Farihy Moraine (Kanada)
7 Volkano Irazú (Costa Rica)
Lake Hillier (Aostralia)
Voahodidin'ny ala maitso mavana izy io, hitan'ny dia nataon'ny Flinders 200 taona mahery lasa izay, nandritra ny fiakarana ho any amin'ny tampon'ny tampon'ny nosy La Recherche archipelago.
Ny lokony mavokely bubblegum mampiavaka azy dia noho ny karazana bakteria velona amin'ny morony masira. Ny marina dia avy amin'ny rivotra ny rano mavokely ao amin'ny Hillier dia miavaka manohitra ny maintso ny zavamaniry sy ny manga amin'ny ranomasina. Ity farihy ity dia eo amin'ny morontsiraka andrefan'i Aostralia, akaikin'ny farihy hafa mitovy loko amin'ny Espaced.
Lake of the Clicos (Espana)
Ny Farihin'i Clicos dia miorina eo amin'ny morontsiraka andrefana ny tanànan'i Yaiza, ao anatin'ny Los Volcanes Natural Park. Clicos dia karazan-trondro azo fihinana be dia be tamin'ny andro taloha ary na dia efa lany tamingana aza izy io, dia mitazona io anarana io ihany ilay lagoon. Ny mampiavaka an'io farihy io dia ny rano maitso emeraoda noho ny fisian'ny zavamanana zavamaniry marobe mihantona.. Ity farihy ity dia mifandray amin'ny ranomasina amin'ny alàlan'ny tava ambanin'ny tany ary misaraka aminy amin'ny morontsiraka fasika. Faritra arovana izy io ka voarara ny fandroana.
Farihy Kelimutu (Indonezia)
Ao amin'ny nosy Flores tsara tarehy, any Indonezia, dia misy ny volkano Kelimutu sy ireo farihy telo miova loko: avy amin'ny turquoise ka hatramin'ny mena amin'ny manga sy volontany mainty. Ity fisehoan-javatra izay mitranga ity noho ny fifangaroan'ny etona sy gazy mipoitra amin'ny hafanana ambony avy ao afovoan'ny volkano ary miteraka fihetsika simika samihafa.
Na dia volkano mahery aza izy io, ny fipoahana farany dia tamin'ny 1968. Hatramin'ny 1992 dia nambara ho valan-javaboary ireo volkano sy ny manodidina azy ireo.
Ny Lagoon Green ao Potosí dia farihy iray misy sira ao amin'ny Altiplano Boliviana, ao amin'ny Tahirimbolam-pirenena Eduardo Abaroa Andean Fauna. Ny tontolo manodidina dia saika toa tany efitra ary voaforon'ny saha geothermal miaraka amina vava kely am-polony mamoaka entona sy fumarole ary farihy misy rano mafana.
Ao amin'io fahagagana voajanahary amin'ny rano maitso sy masira io izay ahitana taratra ny volkano Licancabur, dia zanatany maro an'Andean flamingos no monina ary lasa toerana fizahan-tany lehibe izy io.
Ny farihin'i Natron dia farihy ranon-dranomasina tsy mihetsika, eo amin'ny sisin-tany manasaraka an'i Kenya sy Tanzania, eo ambonin'ny Great Rift Valley. Ny rano alkalinany dia manana tahiry 10.5 tsy mampino noho ny gazy karbonika sy ny fitambaran'ny mineraly hafa izay, avy amin'ireo tendrombohitra manodidina, dia mikoriana mankany amin'ilay farihy. Izy io dia rano kaotika ka afaka miteraka fahamaizana lehibe amin'ny hoditry ny biby sy ny mason'ny biby manatona azy, izay maty voapoizina. Amin'izao fomba izao, Nahazo ny anaram-boninahitra farany maty indrindra teto amin'ny firenena ny Farihy Natron.
Ny mampiavaka ny farihy iray hafa dia ny crust noforonin'ny sira alkaly indraindray manome loko mena na mavokely ny farihy, na dia voasary aza any amin'ny faritra ambany, avy amin'ireo zavamiaina bitika monina eo.
Farihy Moraine (Kanada)
Ity farihy tsara tarehy ity dia misy fiavahana ary hita ao amin'ny Alberta's Banff National Park. Ny ranony turquoise dia avy amin'ny thaw. Tena mahavariana ny tontolo iainany satria ao amin'ny Lohasahan'ny Faha-folo, voahodidin'ny tampon-tampon'ny Rocky. Mamirapiratra indrindra ny farihy amin'ny antoandro, rehefa mahatratra azy mivantana ny masoandro, noho izany dia tsara ny mitsidika azy ny maraina, raha toa mangarahara kokoa ny rano ary taratra ny tontolo manodidina azy.
Misy làlana fitsangantsanganana maro hijerena ny manodidina ny farihy Moraine. Ao amin'ilay valan-javaboary Banff ihany, dia miavaka ny farihy Peyton sy Louise, tsara tarehy koa.
Volkano Irazú (Costa Rica)
Ny Irazú no volokano lehibe indrindra any Costa Rica ary manintona azy ny fizahan-tany. Na izany aza, manintona ny saina ihany koa ilay farihy ao anaty ny lava-bolany, indrindra noho ny loko maintso maitso ao anaty rano, ny vokatry ny fitambaran'ny hazavana sy mineraly ao anaty rano. Mihetsika ilay volkano fa tsy nisy fipoahana nanomboka ny taona 1963.
Ny volana tsara indrindra aleha dia ny volana martsa sy aprily satria kely ny orana ary ny mpitsidika dia afaka mijery ny ranomasimbe Atlantika sy ny ranomasimbe Pasifika avy any Irazu, raha mazava ny andro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » Farihy fito miloko toa any amin'ny planeta hafa
Tranombakoka enina tsy fahita eto amin'izao tontolo izao izay tianao ho fantatra